पूँजी बजार र उत्पादनशील क्षेत्र | गृहपृष्ठ
Home लगानी पूँजी बजार र उत्पादनशील क्षेत्र
on: २७ भाद्र २०७५, बुधबार १०:५५ लगानी
पूँजी बजार र उत्पादनशील क्षेत्र
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले सङ्गठित धितो बजार सञ्चालन गर्न थालेको ३ दशक लागिसकेको छ । तर, यसमा रियल सेक्टरको सहभागिता ज्यादै न्यून रहेको प्रसङ्ग बेलाबखत उठने गरे पनि यस्तो किन भयो भन्ने विश्लेषण भने थोरै भएको छ । नेपालमा संस्थागत कम्पनीहरूको अभ्यास नीतिगत रूपमै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सीमित छ । यस्तै संस्थागत सुशासन अन्य कम्पनीमा प्रवर्द्धन गरिएको छैन । हाल नेपाल एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीको वर्गीकरण यसरी गर्न सकिन्छ :
१. बैङ्क तथा वित्तीय संस्था :
यस क्षेत्रमा २८ ओटा वाणिज्य बैङ्क, ३३ ओटा विकास बैङ्क, ३४ ओटा वित्त कम्पनी तथा ४६ ओटा लघु वित्त कम्पनी रहेका छन् । यी सबै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी नै हुनुपर्ने र सर्वसाधारणलाई शेयर बेचेर शेयर बजारमा सूचीकृत हुनैपर्ने कानून छ । यस्ता संस्थाको नियमन केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ । त्यसैकारण आज यी क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानी कर्ताले उचित प्रतिफल पनि पाउँदै आएका छन् ।
२. बीमा कम्पनी :
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्तै यी कम्पनी पनि पब्लिक लिमिटेड हुनैपर्ने तथा सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । यस क्षेत्रको नियमन बीमा समितिले गर्दै आएको छ । यो क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त गरिरहेका छन् । जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनी, एउटा पुनर्बीमा कम्पनीसहित नयाँ पुराना गरी हाल ३९ ओटा कम्पनी सञ्चालित छन् । र, एउटा जीवन बीमा कम्पनी लाइसेन्स लिने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
३. ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्र :
नेपालको प्राकृतिक स्रोतमध्ये जलस्रोत प्रमुख हो जसमा आधारित रहेर जलविद्युत् आयोजना बन्ने गरेका छन् र सञ्चालनमा आएका छन् । नेपालको कतिपय जलविद्युत् परियोजना नेपाल सरकारले तथा कतिपय आयोजना प्राइभेट कम्पनीले निर्माण तथा सञ्चालन गरेका छन् । कतिपय जलविद्युत् कम्पनी सर्वसाधारणमा शेयर बेचेर शेयर बजारमा सूचीकृत पनि भएका छन् । यस क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना भए पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको वा पर्ने डर भने रहेको बुझिन्छ । र, यो संस्थागत सुशासनकै कमीको कारणले नै भएको हो । यस क्षेत्रको नियामक निकाय लाइसेन्स दिने रूपमा विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् खरीदकर्ताका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छन् । साधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि भने धितोपत्र बोर्ड मात्रै नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको देखिन्छ ।
४. टेलिकम क्षेत्र :
टेलिकम अर्थात् दूर सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण रहेको छ । यो सेवाको नेपालमा ठूलो बजार रहिआएको छ । त्यसैले यसै क्षेत्रका नेपाल टेलिकम र एनसेल ठूला करदाताका रूपमा पनि स्थापित रहँदै आएका छन् ।
टेलिकम क्षेत्रको ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित नेपाल टेलिकम शेयर बजारमा सूचीकृत रहेको छ तर एनसेल अझै पनि सूचीकृत भएको छैन । यस क्षेत्रका कम्पनीमा संस्थागत सुशासन, प्रविधिको विकास तथा पूँजी बजारमार्फत सर्बसाधारणलाई राम्रै प्रतिफल दिने तथा पूँजी बजारलाई समेत बलियो बनाउन योगदान गर्न सक्ने क्षमता रहेको देखिन्छ ।
५. होटल क्षेत्र :
नेपालको शेयर बजारको शुरुआतदेखि नै केही होटल पूँजीबजारमा कम्पनीहरू सूचीकृत रहेका छन् । धेरथोर लाभांश पनि यस क्षेत्रका कम्पनीले दिएका छन् । यद्यपि होटल क्षेत्रको नियमनका लागि हालसम्म कुनै छुट्टै निकाय रहेको छैन । उपयुक्त नियमनको अभावमा सूचीकृत होटलहरूको संस्थागत सुशासनमा आशङ्का हुने गरेको छ । यद्यपि होटल क्षेत्रमा पछिल्ला केही वर्षदेखि ठूलो लगानी भित्रिरहेको छ ।
पर्यटन क्षेत्र नेपालको आर्थिक उत्पादक क्षेत्र भनिए पनि यो क्षेत्रको पूँजी बजारमा खासै ठूलो उपस्थिति छैन । त्यसैले यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न एउटा छुट्टै नियामक निकाय बनाई संस्थागत सुशासन कायम गर्न सके पूँजी बजारमा मात्र नभई समग्र आर्थिक क्षेत्रमै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
पूँजी बजारमा समेट्निुपर्ने अन्य क्षेत्र
६. औषधि उत्पादन :
नेपालमा १ वर्षमा करीब १ खर्ब मूल्यबराबरको औषधि खपत हुने गरेको छ । जसमध्ये आफ्नै मुलुकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ भने बाँकी ६० प्रतिशत औषधि विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ ।
नेपालमा औषधि आयात र उत्पादनको नियमन औषधि व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । उत्पादनका लागि निर्देशिका बनाउने तथा नियमन गर्ने निकाय पनि विभाग नै हो । नेपालका अधिकांश औषधि उत्पादक कम्पनीले डब्ल्यूएचओको जीएमपी मापदण्ड पूरा गरेर औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
तर, यस्ता कम्पनी अझै पनि शेयर बजारमा सूचीकृत भएका छैनन् । यी कम्पनीले कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्रीसमेत विदेशबाटै ल्याएर नेपालमा प्याकेजिङ मात्रै गरिरहेका छन् । तर, विक्रीवितरणचाहिँ नेपालमा मात्रै हुने गरेकाले यस्ता कम्पनीका लागि नेपाल राम्रो बजारका रूपमा स्थापित भएको छ । । औषधि व्यवस्था विभागलाई थप अधिकार प्रत्यायोजित गरेर कडा नियमनमार्फत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासन कायम गराउने र औषधि कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा ल्याउने हो भने त्यसले पूँजीबजारलाई विस्तार गर्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमै ठूलो योगदान पुग्न सक्छ ।
भारतमा आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला औषधि उत्पादक कम्पनी शेयर बजारमा सूचीकृत छन् र ती कम्पनीले लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल पनि दिइरहेका छन् ।
बङ्गलादेशमा पनि केही औषधि उत्पादक कम्पनी पूँजी बजारमा सूचीकृत भएर मुलुककै अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् । भारत र बङ्गलादेशले जस्तै नेपालले पनि संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूति दिलाएर औषधि उत्पादक कम्पनीलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउन सक्छ ।
७. चिनी उत्पादन क्षेत्र :
नेपालमा एक दर्जनभन्दा बढी चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । सरकारले नै चिनी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चिनी उद्योगको प्रमुख कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको उखु नेपालमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भइरहेको छ ।
चिनी उद्योगलाई समेत संस्थागत सुशासन सुधार गरेर पूँजी बजारमा भिœयाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसले पूँजी बजारलाई मात्रै बलियो बनाउने नभएर चिनी आयातलाई रोक्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रकै उत्थानमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्ने देखिन्छ ।
८. सिमेण्ट उत्पादन क्षेत्र :
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुनुअघि नै नेपालमा सिमेण्ट उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका थिए । हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग, उदयपुर सिमेण्ट उद्योग तथा चोभारको हिमाल सिमेण्ट उद्योग त्यतिबेला सञ्चालनमा थिए ।
२०४६ को परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रबाट पनि सिमेण्ट उत्पादन शुरू भयो । हाल नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका ठूला सिमेण्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् र धमाधम थप स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिने क्रम पनि बढेको छ । नेपालले केही वर्षभित्रै सिमेण्टमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरेको छ ।
कच्चा पदार्थ पनि नेपालमै रहेको र उत्पादन खपतका लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजारको पनि सम्भावना रहेकाले सिमेण्ट उद्योगलाई पनि उचित नियमन गरेर पूँजी बजारमा भित्र्याउन सकिन्छ ।
सिमेण्ट उद्योगहरूको नियमनका लागि छुट्टै निकाय चाहिएको छ । पूँजी बजारमा सूचीकरण भएमा सिमेण्ट उद्योगमा लाग्ने ठूलो लगानी सर्वसाधारणबाट पनि उठाउन सकिने हुन्छ ।
९. सूचना प्रविधिको क्षेत्र :
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक रूपमा बढिरहेको छ । जसले यस क्षेत्रको व्यापक मात्रामा बजार विस्तार गरिरहेको छ । यस क्षेत्रको बजार मात्रै विस्तार नभएर यस भित्रका अवयवहरूको पनि व्यापक विस्तार भइरहेको छ ।
नेपालमा अवस्थित कम्पनीले नेपालमै पनि बजार विस्तार गरिरहेका छन् । झन् कतिपय युवाले नेपालभन्दा बाहिर पनि सेवा तथा उत्पादन बेच्न थालिसकेका छन् । सरकारले यस्ता कामलाई प्रोत्साहन दिई यो क्षेत्रलाई सङ्गठित पार्न त्यस्ता कम्पनीलाई शेयर बजारमा सूचीकृत हुने प्रावधान गर्नुपर्छ ।
भारतमा फ्लिपकार्ड, पेटिमजस्ता ठूला कम्पनी स्टार्टअपबाटै प्रगति गर्न सफल भएका हुन् । यस्ता कम्पनीलाई शेयर बजारमा सूचीकरण गराई पूँजी जुटाइएको थियो, जुन बजार विस्तारसँगै विशाल भए र सर्वसाधारणले समेत राम्रो प्रतिफल पाउने अवस्था निर्माण भयो ।
१०. पब्लिक वेयर हाउस :
नेपालमा बस्तु बजार ऐन–२०७४ मा आइसकेको छ । ५३ ओटा वस्तु सूचीकरणका लागि तोकिएका छन् ।
यस्ता वस्तुहरूको ठूलो मात्रामा नेपालमा कारोबार भइरहेको छ । नेपालमा उत्पादन तथा खपत हुने, ठूलो मात्रामा आयात हुने र निर्यातसमेत हुने यस्ता वस्तुहरूको खरीद गर्ने, भण्डारण गर्ने तथा विक्री गर्ने सङ्गठित संस्थाका रूपमा पब्लिक वेयर हाउस कम्पनीको ठूलो सम्भावना रहेको छ । यस्ता कम्पनीमा सर्वसाधारणको लगानीको पहुँच बनाई पूँजी बजारमा समावेश गराउन सके मात्र पूँजी बजारको मात्र नभई देशकै आर्थिक विकासले ठूलो फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ ।
भनिन्छ, वेयर हाउस कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र भारत सरकारको आर्थिक विकास दर उच्च भयो र भारत सरकार दुर्गम क्षेत्रमा पनि सजिलै पहुँच पु¥याउन सक्ने अवस्थामा पुग्यो । नेपालमा पनि यस क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुग्न ढिला भइसकेको छ । तत्कालै पब्लिक वेयर हाउस ऐन ल्याएर यस क्षेत्रमा काम आरम्भ गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।